यति सुन्दर बच्चालाई यसरी कपनको झाडीमा फाल्ने को होलीन् ति आमा ? (भिडियो हेर्नुहोस) - दैनिक नेपाल न्युज
साउन महिना झारी पर्ने समय,मनसुन को मौसम तर त्यो दिन पानी परेको थिएन । सायद भगवानलाई पनि यि बच्चीलाई जिवित नै हेर्न मन थियो,हो हिजो मात्र कपनको त्यो झाडीमा बिस्कुटको कार्टुनमा सानो बालिकालाई कसैले छोडेको थियो । को होलिन ति आमा कस्तो मन होला उनको यो उनको बध्यता हो या नाजायज पाप । जे होस बच्चालाई लाई पानी ले भिजाएन कुकुर बिराले भेटेनन यो नै राम्रो कुरा हो ।
वरपर खेल्ने बालबालिकाले देखे अनि ठुला मानिस बोलाए,सब जना अचम्ममा परे किनकी यो काम कतै बाहिर बाट आएर त्यहाँ छोडेर गएको हुनु पर्छ भन्ने कुरा आयो त्यहाँको मानिसहरुको । तत्काल खबर पाएर केयार बाल गृहकी सन्चालिका त्यहाँ पुगिन र बच्चालाई जिम्मा लिइन । हाम्री समाज कता जादै छ ति भर्खर जन्मिएकी बच्चाको के दोश छ र ? भिडियो हेर्नुहोस…